Charlotte Ziems Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Charlotte Ziems
As Sitecore's VP ee Suuqgeynta Mawduuca, Tifatiraha Guud, Charlotte waxay kormeertaa istiraatiijiyadda iyo qorshaynta hantida nuxurkeeda oo ay ku jiraan ebook-yada, fiidiyowyada, iyo waraaqaha cad ee la jaan qaada oo gaarsiiya qiimaha macaamiisha Sitecore iyo rajooyinka. Waxay u jeceshahay fahamka baahiyaha dhagaystayaasha iyo caqabadaha iyada oo ku saabsan Sitecore iyo farsamada suuqgeynta.
Aniga oo ah qof xirfad ka sameeyay waxyaabo, isgaarsiin, iyo sheeko sheeko, waxaan boos gaar ah ku leeyahay qalbigayga doorka "macnaha guud." Waxa aan la xiriirno - ha ahaato ganacsi ama nolosheena shaqsiyadeed-waxay noqoneysaa mid ku habboon dhegeystayaashayada keliya markay fahmaan macnaha guud ee farriinta. Macno la'aan, macnaha ayaa lumay. Macno la'aan, dhagaystayaashu waxay ku jahwareeraan sababta aad ula xiriirto iyaga, waxa ay tahay inay ka qaadaan, iyo, ugu dambeyntiina, sababta fariintaada